Puntland iyo war xun gaysnimada warbaahinta Maqaar saar ka aha.
Maalinba Homepage cusun oo Magaca Puntland wata baa sidii Likihii soo fooracaya tan iyo intii la mammnuucay Radiyihii SBS ee Boosaaso warka ka soo tabin jiray.
Waxayna ahayd mid la sugaayey in ay Kooxda Carte markii God war been abuura ah laga xiro mid kale raadiyaan si ay Ra'yiga Shacabka iyo kan Caalamka u khaldaan.
Waxa kale oo kalifay in la badiyo Homepageyadaa maqaar saar ka ah ee looga gol leeyahay Khalkhal galinta Puntland, markii ay reer Puntland u cadaatay in ay isbahaysi Carte iyo Somaliland ka kooban BBCda Laanta afsomaliga bililiqo ku haystaan , sidaasna aan looga fadhiyin in ay wax Puntland danteeda ah sheegan.
Iskadaa in ay BBCdu wax reer Puntland dentooda ah sheegaane, waxay iyagoo adeegsanaya Awooda Warbaahineed ee BBCda ka shaqeeyaan afuufida iyo Dab ka dhexshidka reer Puntland , taas oo uu u adkaysan waayey Maamulka Puntland kuna kaliftay in ay BBCda ka maamnucay in ay Puntland dhexdeeda wax ka soo tabiyaan waxayse dad badan jeclaan lahaayeen in lagu dacweeyo sixun uga faa´iidaysi iyo sixun u isticmaal warbaahinta xorta ah.
Si marka booska war xun gaysnimo ee BBCda laanta Somaliga iyo Radiyo SBS ee Boosaaso ka baxeen loo buuxiyo, waxaa la furay Homepageyo badan oo magaca reer puntland maqaar saar ahaan u wata iyadoo laga faa´iidaysanyo Maahmaahda ah Abeeso dhul u eki bay kugu dishaa Homepagena Puntland u eki.
Waxana war xun gaysnimada dhinaca Ra'yi Caalamka loo xilsaaray IRIN oo ay wax ka qoraan Rag ay Yuusuf Garaad isku hayb yihiin, taas oo badashay hadda BBCda laanta somaliga oo ka yara gaabsatay waayahan danbe puntland, lase rumaysan yahay in ay isu gaabinayso sidii ya Shirka Nayroobi haddii uuna kooxda Carte dan ugu jirin u fashilin lahad.
Inkasta oo uu Dhidar Dhogor Idaad xirto haddana Dabadiisa dheer ma dadi karo oo in kasta oo magac reer puntland maqaar saar ahaan loo soo qaato hadana waxaa muuqda in ay Homepageyo badan oo xamar ka soo galijireen Howshoodii gabiyaan iyagoo maalin dhaaf iyo mararka qaarkood usbuuc dhaaf u soo galaan, meesha kuwa maqaar saar ka ah ay maalinkasta u soo galan marka laga reebo maalmaha ay kuwa xamar soo galan marmarna way soo wada galaan lakiin wax badan ma qoraan.
Waxaa kale oo ka shifaya in ay badanaa maqaar saar yihiin iyagoo waagii ay reer puntland shisheeyaha is hayeen oo gaar ahaan kismanyo dagaalkeedu socday, homegpageyaduna bur iyo buunsho u kala baxeen ay homepagayada maqaar saar ka ah wax qoraal ah samayn jirin sidaa darteedna ay adagtahay in la rumaysto in ay kuligood hurdadii asxaabu al kahfi oo kale haddeer oo ay puntland is haysato ka soo wada anfariireen oo ay kuligood sidaas labeebshe hoyadeed bay u himootaa u wada yihiin.
Waxaa kale oo maqaarka saaran ka qaadaya sida ay ugu howlan yihiin isku dirka, been ka sheega, balo ka dhex abuurka iyo isku dayida beel beel uka daadinta reer puntland waxayna dad badnai aaminsan yihiin in ay gudbeen heerka khilaafka reer puntland ka dhaxeeya marayo oo ah xukun la isku haysto ninkastan uu rabo in uu dadka kasbado ee aanay arintu ahayn sida ay wadaan homepageyada maqaar saar ka ah , oo ka turjumaya nacaybka cida ay run ahaantii u dhasheen oo aan ahayn reer puntland.
Anagu idinma kashifaynee yuuna nacaybka aad reer puntland u qabtiin idin kashifin jaamac cali jaamacna dadka ka sii fogayn.